Ity ekipan’Atsimo Andrefana ity izany no hanandrana voalohany an’ireto tompon’ny amboaran’i Madagasikara 2011 ireto amin’ny 1 ora tolakandro eny an-toerana.
Samy voalohany tany amin’ny vondrona nisy azy rahateo izy ireo ka tsy maintsy mihaona voalohany, araka ny fitsipika mifehy amin’izao fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny baolina kitra izao. Aorian’io dia fihaonana eo amin’ny Akademia Ny Antsika avy any Antsirabe sy ny Japan Actuel’s avy eto Analamanga no hamarana ny andro voalohany ho an’io dingana farany eo amin’ny "THB Champions Leangue" io. Samy te hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny fifaninanana afrikanina avokoa ireo ekipa efatra tafita ireto. Mikatsaka ny hanao pao-droa, satria efa natombony tamin’ny fahazoana ny amboaran’i Madagasikara, ny ekipan’Itasy amin’ity indray mitoraka ity. Isan’ireo tanjona napetraky ny ekipa rahateo ny hihazona izay efa azony dia ny tompondakan’i Madagasikara efa norombahiny tamin’ny 2010.
Ny ASJF Capricorne sy ny Japan Actuel’s aloha hatreto no mbola tsy nandia izany fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ho an’ny ekipa tompondaka izany. Tamin’ny herintaona dia efa teo an-dalana ho any ny ekipan’i Manjakaray no votso-droa tampoka. Ny Akademia Ny Antsika kosa dia efa niatrika ihany saingy voa teo amin’ny fihodinana voalohany nanoloana ny ekipa renioney tamin’ny taona 2009.